HALKAAN KA AKHRISO:- WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH AXAD 26-KA JANNAAYO 2020-KA
Sunday January 26, 2020 - 10:41:09 in Wararka by Mogadishu Times
DOWLADDA SOOMAALIYA OO TACSI U DIRTAY SHACABKA IYO DOWLADDA TURKIGA Ra'iisul Wasaaraha XFS, Md.Xasan Cali Kheyyre ayaa dowladda aan walaala ha nahay ee Turkiga uga tacsiyadeeyay dhibaatadii ka dhalatay dhul gariirkii ka dhacay gobalka
DOWLADDA SOOMAALIYA OO TACSI U DIRTAY SHACABKA IYO DOWLADDA TURKIGA Ra'iisul Wasaaraha XFS, Md.Xasan Cali Kheyyre ayaa dowladda aan walaala ha nahay ee Turkiga uga tacsiyadeeyay dhibaatadii ka dhalatay dhul gariirkii ka dhacay gobalka Elazig ee Bari ga Turkiga. Md.Kheye oo khadka Taleefoonka kula xirii ray madaxweyne kuxig eenka Turkiga, Fuat Oktay, ayaa u muujiy ay sida dowladda iyo shacabka Soomaali yeed ay uga tiiraayoonayaan dhibaatadii ka dhalatay dhul Gariirka
R/Wasaaraha ayaa u rajeeyay dadka waxyeeladdu kasoo gaatay dhul gariirka in si dhaqsa leh ay ku bogsadaan.
DOWLADDA SOOMAALIYA OO SAARTAY AMAR RO KU WAJAHAN XARUMAHA DHAQAN CELINTA
Dowladda Soomaaliya ayaa soo saar tay Go’aamo ka dhan ah Xarumaha dhaq an celinta ee ku yaalla M/Muqdisho, wax aana ay sheegtay in xarumahaasi aysan waafaqsaneyn Sharciga.
Maxkamadda racfaanka gobolka Ban aadir ayaa ammar ka soo saartay goobo xabsi u eg oo si qorso odi ah uga shaqeeya gobolka Banaadir iyo xarumaha qur’aan sa arka.Abshir Cumar C/llaahi oo shir jaraa ’id ku qabtay M/Muqdi sho, sheegay in dacwooyin ka dhan ah xa rumahaasi oo ah in dad badan lagu dhiba ateeyo ay soo gaareen.
Waxaa uu sheegay in looga baahan yahay in ay soo gudbiyaan Sharciyadda ay heystaan, maadaama Caruurta lagu ha ayo halkaasi iyo waalidiintooda mararka qaar ay kala kulmaan dhibaatooyin.
Waxaa uu sheegay in aan meel ah eyn xabsi aan lagu heyn karin dadka ,ma adaama uusan Sharcigu qabin.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku wareejisay dowladda Demark Gabadh la gu haayay mid ka mid ah xarumahaasi oo dhaqancelin loo keenay, waxaana ka dha shay buuq fara badan.
GUDDOOMIYE KU XIGEENKA BARLAMAANKA PUNTLAND OO KU BAAQAY IN TANAASUL LAGA MUUJIYO HADALKII WASIIR GOODAX
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee barl amaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa masuul iyi inta waxbarashada Puntla nd ugu baaqay inay ka qe yb qaataan imtixaanka mid aysan ee dowladda federal ku qaado. Waxaase uu ku taliyay in Puntland ay kaalin ku yeelato dej inta ,qaadista , sixitaanka iyo baahinta nat iijada imtixaanka si ay meesha uga baxdo loollanka wasaaradaha waxbarashada ee federalka iyo in la xalliyo dhibta ardada ka soo gaaraysa helitaanka shahaadada.
Guddoomiye ku xigeenka barlamaan ka ayaa sheegay inuu jiro khilaaf siyaasi ah oo dhaafsiisan waxbarashada heerarke eda kala duwan oo u dhexeeya Hoggaami yayaasha DF iyo Puntland.
"Ma ah waxa la isku hayo waxbarasha da keliya , balse waxaa la isku khilaafsan yahay waa Jaangooyada Siyaasadda DF dalka ku hogaaminayso oo u baahan is og gol,is qancin iyo isu tanaasul ka yimaadda 2da heer dawladeed.” ayuu yidhi Ismaaciil Warsame.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya, C/hi Goodax Barre, ayaa wareysi uu BBC ku sheegay in Puntland aysan siindoonin wax shahaado ah, haddii aysan kamid no qon imtixaanka guud ee dowladda feder alku maamulayso.
Gaari nooca raaxadda ah oo lagu xiray waxyaabaha Qarxa ayaa maanta ku qa rxayinta u dhexeysa Isgoysyada Xoosh iyo ExKoontarool ee M/ Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa mid dhawaqiisa laga maq lay degmooyinka Dharkeenley iyo Wadajir.
Gaariga Qaraxa lagu xiray ayaa waxaa sa arnaa Ciidamo ka tirsan dowladda Sooma aliya sida dadka degaanka ay xaqiijiyeen.
Laba Askari oo la socday gaariga ayaa ku geeriyooday qaraxaas, isla markaana wax aa goobta qaraxu ka dhacay tegay Ciida mo kale oo ka tirsan dowladda oo halkaasi ka sameeyay howlgallo.
KAALIYAHA XOGHAYAHA ARRIMAHA DIBADDA MARAYKANKA OO BOOQDAY SOOMAALIYA
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibed da Maraykanka Tibor P. Nagy ayaa safar ku tagay M/Muqdisho, Soo maaliya. Isaga iyo R/Wasa are Xasan Khayre ayaa ye eshay kulan ay kaga wada hadleen dib uhabaynta amni ga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Kaaliyaha Xoghayaha ayaa hoosta ka xariiqay sida ay uga go'antahay dowladda Mareykanka inay taageerto dadaallada do wladda Soomaaliya ay ku hormarineyso nabadda iyo in lala dagaallamayo AlSha baab.
Intii lagu guda jiray booqashadiisa, Ka aliyaha Xoghayuhu wuxuu sidoo kale la ku lmay wakiilo ka socda bulshada rayidka ah iyo siyaasiyiinta mucaaradka.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibed da Maraykanka Tibor P. Nagy oo safar dheer ku soo kala bixiyay dalal badan oo Afrikaan ah, ayaa ujeedada safarkiisa wax aa lagu tilmaamay inuu iftiimin doono sida ay Mareykanku uga go'antahay la shaqe ynta dhalinyarada Afrika. Wuxuu horumar in doonaa Barnaamijka Iskaashiga Jaama cadda, oo ah barnaamij cusub oo loogu tal agalay in lagu dhiirrigeliyo iskaashiga ka dhexeeya jaamacadaha Mareykanka iyo Afrika.
Booqashadiisa ayaa sidoo kale iftiimin doonta sannadguuradii 10aad ee Hog gaamiyaasha Hoggaanka Da'yarta ee Afr ika(YALI),oo ah barnaamij ka dhalinyarada Afrikaanka u fududeynaya xiriirrada ay la leeyihiin asaagooda Mareykanka iyo guud ahaan Afrika.
Soomaaliya waxay kamid tahay lix wa ddan oo uu kuxigeenka xoghayuhu ku nu ux nuuxsaday muhiimadda ay leedahay kor u qaadista dowlad wanaagga. Dimoq raadiyada, horumarinta nabadda, amniga gobolka, la dagaallanka musuqmaasuqa, iyo xojinta xiriirka ganacsi iyo malgashi ga.
KOONFUR GALBEED IYO IGAD OO KULAN KU YEESHAY NAYROBI
Madaxweynaha DGKG Soomaaliya, Ca bdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gar een) oo weli ku sugan Nayrobi ay aa kulan la Qaatay Wakiilka IGAD ee Soomaaliya Maxa med Cali Guyo.
Madaxweyne Cabdic asiis Xasan Maxam ed (Lafta Gareen) ayaa Madaxda kasoco tay IGAD Waxay ka wada Hadleen Arima ha Doorashooyinka Dib u heshiisinta iyo Sidii Tababar ay u siin laha yeen Gudiya da Doorashooyinka Maadaa ma KG ay Doorasho ku soo Wajahan tah ay Dhaw aan.
Waxaa sidoo kale looga hadlay hannaa nka doorashooyinka Soomaaliya ee soo socda iyo Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
MdLaftagareen ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa M/Nayrobi ee Ca asim adda Kenya oo uu ka waday kulamo kala duwan.
ALSHABAAB OO LA WAREEGAY DEGAANKA FARLIBAAX
Wararka naga soo gaaraya degaanka Farlibaax oo 45 Km u jira M/Beledweyne ayaa waxa ay sheegay aan in AlShabaab ay Shalay qabsadeen deg aankaasi. Iska horima ad kooban ayaa dhe xmaray Ciidanka dowl adda iyo Ururka AlShabaab, wax aana la sheegay in Ciidanka dowladda ay iska bax een degaankaasi.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan AlShabaab ay gacanta ku haya an degaanka. Ciidanka dowladda Sooma aliya ayaa wadda abaabul ay ku doonay aan in ay dib uga la wareegaan AlShaba
NIN HUBEYSAN OO TOOGTAY LIX RUUX OO QOYSKIISA KA MID AH
Ciidanka Booliska magaalada Rot am See oo ku taalla koonfurgalbeed Jarmal ka ayaa xaqiijiyay nin hubeysan in uu too gtay Lix ruux oo ka mid ah Qoyskiisa.
Dadka uu toogtay nin kaan ayaa waxaa ka mid ah labadiisa waalid Boolis ka ayaa sheegay ninkaan ugu dambeyntii uu ku war galiyay Booliska.
Da’da Ninkaan dhibka geystay ayaa lagu sheegay 26 jir Ninkan ayaa haystay qori sharciyeysan waxaana uu isku dhiibay Ciidanka Booliska.
Waxaana meeydadka oo ka koobnaa 3 rag ah iyo 3 dumar ah laga helay gud aha maqaaxida waxayna da’doodu u dhax eeysay 36 ilaa 69 sano jir, sida ay sheeg een booliska gobolka BadenWürtte mberg.
Waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dha awacmay laba qof oo kale oo isla qoyska ka tirsan kuwaasi oo uu mid ka mid ah dha awciisu halis yahay.
KHASAARAHA KA DHASHAY DHULGARIIR KU DHUFTAY TURKIGA OO SII KORDHAYA
Madaxwaynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa booqanaya gobolkii uu Jimcihii ku dhuftay dhulgariirka si uu ula kulmo dadkii ku waxyeeloobay.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay kuw aasi oo intooda badan ku noolaa gobolka Elazig.
Dhulgariirka ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad ka badan 1200 oo qof. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxaa burb urka hoostiisa ka soo badbaadiyeen dad gaaraya 40 qof. Xukuumadda Turkiga ay aa uga digtay dadka in ay dib ugu laabta an guryaha burburka uu soo gaaray.
Waxaa sidoo dadka uu dhulgariirka sa ameeyay loo qaybiyay Teendhooyiin iyo qalabka kale ee qabowga looga gaashaan to. Dhul gariirka ayaa ku dhuftay bariga Turkiga abaare 9kii fiidnimo ee xilliga dalk aasi, waxaa uuna dhulka ku daray dhismo oyin iyadoona la arkayay dadka deegaan ka oo ku cararyay waddooyinka.
Boqaal shaqaalaha samatabixinta ay aa lagu dabaalay gudaha iyo banaanka deegaankaasi. Waxay isticmaalayeen, cag afcagafyo, agabka korontada iyo xitaa ga cmahoodo si ay usoo samatabixaayn daka ku xayitan dhismooyinka buburay.
Dhulgariirkan oo ah kii ugu horreyay ee ku dhufta deegaankaasi ayaa waxaa uu dadka ku riday argagax xooggan wax aana la sheegay in xitaa laga dareemay dalalka dariska la ah sida Suuriya, Lubn aan iyo Iran.
Sida ay sheegtay Wasaaradda ka Ho rtagga Musooboyinka Turkiga, ka dib dhul gariirka waxaa la diiwaan galiyay oo la da reemay ilaa lixdan dhul garir oo yaryar oo aan dhibaato geysan.
Waxay wasaaraddu sheegtay in ilaa 400 oo ah kooxahaa samatabxiyaasha ay haatan ku sii wajahan yihiin deegaanka musiibadu ku habsatay kuwaasi oo sida te endhooyin iyo sariiro loogu talagalay dad ka halkasi ku barakacay.
Dhulgariirka ayaanan ku cusubeyn Tur kiga oo sannadkii 1999kii waxaa galbeed ka magaalada Izmit ku dhuftay dhulgariir ay ku dhinteen ilaa 17, 000 oo qof.
PUNTLAND OO AMAR KU BIXISAY IN LA HAKI YO GO'AAN KASOO BAXAY HAY'ADDA SOCD AALKA SOOMAALIYA
Madaxweyne ku xigeenka Puntland, Axmed Karaash ayaa amar ku bixiyay in la hakajiyo xil wareejinta agaasimaha hay’ adda socdaalka iyo jinsiyadaha Sooma ali ya xafiiskeeda Punt land.
Go’aankaan ay aa ku soo beegm ay ka dib markii ag aasimaha hay’ad da socdaalka Soomaaliya uu agaasime cu sub u soo magacaabay xafiiska Puntland.
Halka agaasimihii hore ee hay’adda looga yeeray xafiiska dhexe ee hay’adda oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxwe yne ku xigeenka Puntland, ayaa lagu faray masuuliyiinta amniga iyo masuuliyiinta soc daalka in illaa amar dambe la hakiyo xil wareejinta.
Lama oga sababta ka dambeysay go’ aanka an, balse wuxuu ku soo aadayaa iy adoo Puntland iyo dowladda federalka ka dhextaagan yahay khilaaf siyaasadeed oo culus.
MACALLIN ISKUUL OO LAGU DILAY G/NUGAAL IYO FAAH FAAHIN KASOO BAXEYSA
Wararka aan ka heleyno degmada Bur tinle ee Gobolka Nu gaal ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas lagu dil ay mid kamid ah Macalimiinta wax ka dhigi jir ay Iskuulada ku yaalla gud aha degmadaas.
Kooxo ku hubeysan Bastoolado ayaa dad ku sugan Burtinle waxaa ay sheegeen inay toogteen Macalinka, isagoona u geer iyooday dhowr xabadood oo qeybaha sare ee Jirkiisa looga dhuftay.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistee Max amed Hayaan Geelle, isagoona ka howl gali jiray mid kamid ah Iskuulada ku yaalla degmada Burtinle ee G/ Nugaal.
Wasaaradda Waxbarashada Puntland iyo dhammaan Maaamulka Dugsiyada sa re ee degmada Burtinle ayaa ka tacsiyade eyay geerida Ustaad Maxamed Hayaan Geelle oo lagu toogtay qeybo kamid ah gudaha degmadaas.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta loo di lay Macallinka, hayeeshee waxaa uu dilka as qeyb ka noqonayaa dilala horey uga dhacay degmada Burtinle ee G/ Nugaal ee maamulka Puntland.
DOWLADDA SOOMAALIYA OO KALA DIRTAY MASUULIYIINTII RUGTA GANACSIGA GOBOLKA BANAADIR
Wareegto ka soo baxday xafiiska wasi irka ganacsiga iyo warshadaha DFS Md. C/hi Cali Xasan ayaa lagu kala diray mas uuliyiintii rugta ganacs iga iyo warshadaha gobolka Banaadir.
Ciidanka Hay’adda Nabad suggida ay aa dhawaan xiray Gudoo miyaha rugta ga nacsiga gobolka Bana adir iyo ku xigeenk isa ka dib markii lagu eedeeyay in magaca abistooda ay Shab aab ka qeyb qaateen.
DADKA UU SOO RITAY CUDURKA AAN LA AQO ON EE SHIINAHA OO GAARAY 1200 OO QOF
Tobonaan milyan oo qof ayaa awoodi waayay sanadkan in ay ka qeybgalaan da baaldegga sanadka cus ub ee Shiinaha, ka dib markii ay dowladdu hakis ay dhaqdh aqaaqa dadw eynaha labo magaalo oo ku yaalla Shiinaha, saba bo la xiriira virus di laa ah oo halkaasi ka dillaacay.
Guddiga Qaran ee Caafimaadka Shii naha ayaa sheegay in dhimashada caabu qan cusub ay hadda gaartay 41 qof, halka bukaannada uu soo ritay ay gaarayaan 1200 oo qof, iyadoo cudurku uu isaga talla abay 29 gobol oo Shiinaha ah.
Dadka uu cudurkani asiibay ayaa wax aa ku jira 15 ka mid ah shaqaalaha caaf imaadka, hal dhaqtar isagu waaba uu u dhintay.
Meelaha loo dalxiiska tago ee ku ya alla magaalooyinka Beijing, Shanghai, Sanyaiyo iyo Hainan ayaa la xiray.
Magaalada Hong Kong ayaa mas’uuliyiin tu waxay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah iyaga oo joojiyay dabaaldegyada la qo rsheeyey in lagu maamuuso sanadka cus ub ee Lunarka islamarkaana xiray iskuullada.
Dhanka kalana, viruskan ayaa si tartiib ah ugu faafaya dunida. Ilaa 5 kiis oo cudurk an ah ayaa laga soo weriyey dalka Thail and. Asutralia ayaa soo werisay ilaa afar ki is halka Faransiiska, Japan, Malaysia, iyo Taiwan ay soo weriyeen ilaa saddex kiis dalkiiba
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md, Cabdiraxmaan C/hi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta daaffuray shirka dib u hub inta tirada qaxoontiga ka diiwaan gashan Somaliland, munaasabadan oo ay soo qa banqaabisay Hay’adda Qaxoontiga iyo Ba rakacayaasha Qaranka. Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md,Cabdiraxmaan C/hi Ismaaciil (Saylici) oo halkaasi ka had lay ayaa tilmaamay ahmiyada ay leedahay tiro koobka qaxoontiga ku sugan halkaas, isagoo ku ammaanay Hay’adda Qaxoont ioga iyo Barakacayaasha shaqada culus ee ay bilowday.
Madaxweyne ku xigeenka oo furay Xaf ladaasi ayaa yiri "Salaan ka dib waxaa ru ntii maanta sharaf iyo farxad weyn noo ah in nidaam lagu diiwaan gelinayo dadka ma gangalyo doonka ah ee qaxoontiga Somali land inala jooga oo lagu ogaanayo tiradoo da rasmiga ah inay tahay arin aad iyo aad u muhiima” Madaxweyne ku xigeenka ay aa waxa uu sheegay inaan maanta qaxo ontiga ku sugan Somaliland aanay daree min wax fa quuq ah islamarkaana ay nab ad gelyo ugu nool yihiin waddanka "Wax ay taasi muujin aysaa inaynu innaguna Caalamka shuruu cdiisa aynu dhawrno waana ta keentay in laynoo yimaado ma anta dadku magan ge lyo inoo soo doon taan oo inay nabad ku n oolaadaan inoo soo raadsadaan oo ay ina gu dhex nool yihiin oo aanay faquuq ka da reemin Som aliland maanta”
Dhanka kale Waxa uu Madaxweyne ku xigeenku laamaha kala duwan ee ku boori yey inay diiwaan gelintaa kala shaqeeya an Hay’adda Qaxoontiga iyo Barakacaya asha.
MARKABKII SIDAY XADHIGA INTERNETKA EE DARE 1 JABUUTI OO DIB LOOGA CELIYEY BIYAHA SOMALILAND
Ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ayaa dib u celiyey markabkii siday xadhiga Internetka Badda dhexma ra (Fiber Optic Cable DA RE1 Djibouti ) oo la doon ayey in Berbera la keeno. Ciidamada oo digniin sii yey markabkaasi ayaa ka dhago adeegay, islamarkaana isku dayey in uu rasaas kor u rido si uu u cabsi galiyo ciidanka Soma liland, waxaa nay ciidanka xeebaha Somali land rasaas ku fureen taas ayaa keentay inuu dib uga noqdo biyaha Somaliland.
Saraakiisha Ciidanka Illaalada Xeeba ha Somaliland oo Caawa wargeyska daw lad da ee Dawan waraysi siiyey ayaa shee gay in ay iyagoo dhowraya masaaliixda Siyaa siga ah iyo xidhiidhka 2a dawladood ka dhexeeya ay wakhti dheer digniin siinaye en Markabkaasi, isla markaana aanay wax jawaab ah ka bixin Rasaasta laga rigay. Ha se ahaatee markii uu ka joogi waayey xadgudubka uu sameeyey ay talaabo ka qaadeen, kuna celiyeen xaggii uu ka yimi.
"Markabkaasoo ka soo dhaqaaqay dal ka Djibouti oo jiidayey Xadhig Cable ah , wuxuu biyaheena meelo kamida ku soo ga lay si aan sharci ahayn oo aan laga wada hadlin oo sharci darro ah, markaa Markab kaasi wuxuu soo galay biyaha 3xaad iyo Biy aha 2aad ee Somaliland meelo kam ida. markaa Ciidanka ayaa dhowr jeer ishortaagay, markaa wuu iska dhego mari yey amarkii Ciidanka, rasaasb aanay cirka u rideen Ciidankii Saarn aa.”ayuu yidhi Ta liyaha Ciidanka Illaalada Xeebaha ee Sal dhiga Saylac Cumar Caa dil Qalinle. Waxaanu intaas raaciyey "markaa Caa wa goor ay saacadihii dambe ahayd, ayaa la gu guulaystay in laga leexiyo wixii Bi yaha Somaliland ah oo loo leexiyo Biyaha Caa lamiga ah, markaa halkaas ayey howshu ku dhamaatay”.
Mashruuca xadhiga Internetka ee DA RE1 oo 7aadkii hore lagu daahfuray dal ka Djibouti, isla markaana qaybta la geyna yo Soomaaliya ay saami ku leeyihiin Shir kado Somaliland laga leeyahay, ayaan wa xheshiis ah ama isfahama ilaa hadda inta la ogayahay aanay ka gaadhin Jabuuti iyo Somaliland, taasoo ah sababta in Ciidam adda Illaalada Xeebuhu isuhortaageen oo ay dib u celiyaan.
GOLAHA WASIIRRADDA OO OGGOLAADAY HE SHIISKA KAALMADA DEYNCAFINTA EE DOWL ADDA NORWAY
Shir aan caadi ahayn oo ay Golaha Wa siirradu maanta Muqdisho ku yeesheen ayey ku ansixiyeen oggolaanshaha heshii ska ay Norway ku caawineyso deyncafi nta Soomaaliya. Dowladda Norway ayaa bixineysa lacag gaareysa $400 Milyan oo ah qaanta Bangiga Adduunku ku leeyahay Soomaaliya.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib mar kii hay’adaha maaliyadda adduunka iyo dowladaha deymaha ku leh Soomaaliya ay ku qanceen dibuhabaynta dowladda Soomaaliya ay ku sameysay hay’adahee da maaliyadeed saddexdii sano ee la soo dhaafay. Hay’adda lacagta adduunka, Ba ngiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika ee ayaa la filayaa in todobaadyada soo socda ay ku dhawaaqaan in deynta la ga cafiyay Soomaaliya, taas oo bog cusub u fureysa dhaqaalaha dalka.
BOOLISKA HIRSHABEELLE OO GACANTA KU DHIGAY AABBE WIILKIISA DILAY
Taliyaha Ciidanka Booliska M/Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa shee gay in Ciidanka booliska ay gacanta kusoo dhigeen Aabaha wiilkiisa dilay oo laga qabtay Tuulo hoos tim aada Jo whar.Waxaa uu sheegay in sha lay markii uu dilka geystay uu goobta ka baxsaday, isla marka ana howlgal ay sameyeen Cii danka gacanta lagu soo dhigay.
Cismaan Ibraahim waxaa uu shalay gal ab wiilkiisii curadka ahaa oo la oran jirey Ibraahim Cismaan Ibraahim uu kugowr acay Jowhar.
Falkan naxdinta leh oo ka dhacay laan ta Faanoole ee xaafada Horseed deg mada Jowhar ayaa waxaa isla goobta ku geeriyooday Ibraahim Cismaan oo ahaa 14 sano jir. Lama oga sababta keentay in aabbaha dhalay wiilka dhalinyarada ah uu mindi ku dilo,waxaana falkan uu yahay mid ka mid ah falalka naxdinta leh ee soo mara mag aalada Jowhar xarunta dowlad
goboleed ka Hirshabelle.
WARARKII UGU DAMBEEYEY XIISADDA GOBOL KA GEDO EE DF IYO JUBALAND OO KA DARTAY
Magaalada Baardheere ee gobalka Ge do ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wa xaa ka jiray isbadbadallo dhanka maamul ka, dowaladda federaalka ah ayaa badash ay ama magacawday maamul ka duwan midkii Jubbaland taasi oo keentay xiisad iyo colaad u dhaxeysa dadka deegaanka dhexdooda gaar ahaan gudaha beesha Mareexaan.
Maanta waxaa la sheegayaa inuu dha qdhaaq cusub jiro, gaar ahaan xarunta de gmada Baardheere, waxaana la wareegay Cismaaciil Sheekh Cabdi Qorax oo ah ma amulka uu magacaabay Axmed Madoobe iyada oo ciidamo taageersanaa dowladda la sheegayo in qaarkood ay kala jabeen oo beelaha ku kala biireen.
Suldaan Hiiroow Cismaan oo ka mid suldaamada gobalka Gedo oo la hadlay id aacadda Goobjoog ee Muqdisho ayaa she egay in isbadalka dhanka maamulka ah uu dib u dhigay magaalada Baardheere ho rmarkeedii, isaga oo yiri " Magaalada Baa rdheere waxaa ka jira maamul hore ay soo magacowday dowlad goboleedka Jubbl and iyo mid horay u jiray oo dowladda fe deraalka ah ay soocelisay hadda”, Sulda anka waxaa uu intaasi ku daray in labada maamul ee ay kala magacaabeen DF iyo Jubbaland ay is horfadhiyaan.
Suldaanka oo hadalkiisa sii wato ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka ah soo cel inta maamulkii hore diidmo ay diidan tahay dowlad gobaleedka Jubbaland, waxaana uu xusay in la doonayo in dadka degmada la iska horkeeno.
"Waxaa ay leedahay dowladda federa alka ah Axmed Madoobe wax taageersan marabno, qaab nuucaas ah ayeey u soo celisay, labadii maamul ee lasoo magaaa bey oo mid ka mid ah uusan sharci aheyn iyo midkii oo la doonaayo in degmada la iskaga horkeeno ayaa hadda halkaan ka jira” ayuu yiri Suldaan Hiiroow
Dhanka kale Suldaan Hiiroow ayaa xu say in wasaaradda arrimaha gudaha ays an xaq u laheyn maamul degmo ama mid gobal in ay soo magacowdo, waxaana uu sheegay in arrintaas ay leedahay dowlad gobaleedka maadaama dalka uu yahay federal.
"Wadanku waa nidaam federal ah nida amkaas federalka ah wixii degmo ah iyo gobal ah magacaabistiisa dowlad gobale edka ayaa iska leh, dowladda federal ama wasaaradda arrimaha ma soo magacaabi karto guddoomiye oo dowlad gobaleed ah ma soo magacaabi karto, ayadoo u jeeda du tahay Axmed Madoobe ayaan la dagaa lameynaa ayey dowladdu waxaan sharci aheyn ku qasabtay meeshaan ayuu yiri”
Ugu dambeyn Suldaan Hiiroow Cisma an ayaa ugu baaqay dowladda federal ah in faregalinta ay ka deyso degmada Baa rdheere si horay ay ugu soco loona helo maamul u adeega dadka deegaanka.
Suldaan oo arrintaasi ka hadalaya "Wa xaan leenahay halaga daayo faragelinta oo dhibaatada dowladda federaalka haka deyso dadka walaalaha ah ee degan deg madaan,Baardheere waa degmo barwaa qo ah oo beero iyo xoolalo leh oo waxaa ay ka mid tahay meelaha ugu barwaaqada badan dalka, dowladdu dadkaas waxna ma ay tarin mashaariicna kama aay fulin haddii aysan wax tareen haka deyso far agelinta ayuu yiri Suldaanka”.
Dowladda federaalka ah oo dagaal ku la jirta maamulka Jubbaland ayaa la shee gayaa iney hub iyo ciidan geysay Gedo, taasi oo dadka ka dhexabuurtay kalsoonidarro iyo cabsi laga qabo iskudhac bee sha Mareexaan dhexdeeda ah. XigashoradioGoobjoog.com
ODAYAASHA DDSI OO QADO LOOGU SAME EYAY MAGAALADA GAROOWE
Odayaasha Dhaqanka ee Dowlad Dee gaanka Soomaalida Itoobiya oo maalma ha anba booqasho ku joogay M/Garoowe ayaa maanta qa do sharaf loogu sameeyay magaaladaasi.
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland ah na Kusimaha Ma daxweynaha, Axmed Cil mi Cismaan (Karaash) ayaa Odayaasha Dhaqan ka qado sharaftan ugu sameeyay meel banna anka ka yara ah M/ Garoowe.
Md.Karaash ayaa waxaa kulankan qado shara fta ah ku wehlinayay Wasiiro, Xildhi baano iyo Hogaanka Dhaqanka Puntland.
Odayaasha Dhaqanka ee DDSI oo uu hoggaaminayo Garaad Kulmiye Garaad Maxa med Garaad Dool ayaa maalintii Kha miista soo gaaray M/Garoowe, iyadoo uje edada ay u yimaadeen ay la xiriirto, sidii loo dhameen lah aa dadaalada lagu soo ge bagabeynayo xal u helidda dagaaladii dhawaan beelo walaalo ah ku dhex maray Deegaanka Dhumay ee Gobo lka Sool.
Kusimaha Madaxweynaha Puntland oo boggaadiyay socdaalka Odayaasha DDSI ka yimid ayaa dhanka kale ku ammaanay, sida ay ugu soo gurmadeen joojinta dhiig ga beelihii walaalaha ahaa ee ku wada dagaalamay Dhu
Bishii Janaayo 14, Microsoft ayaa joojisay taageerida dheeriga ee ay siin jirtay Windows 7, taasoo la micno ah in ganacsatada iyo macaa miisha Dugsiyadda Waxbarashadda ee ku dhegan isticmaalka Barna amijkan Window7 ee duuga ah, ay tahay inay bixiyaan lacagaha cusbo onaysiinta dhanka amniga ee afka qalad lagu yiardo (ESUs).
Mid ka mid ah adeegsadayaashan ku qasban in ay bixiyaan khid madda helista amniga iyo dayactirka barnaamijkan ayaa waxaa ka mid noqotey dowladda Jarmalka, oo ay tahay inay siiso Microsoft ugu yaraan Aduun dh an $886,000, ka dib markii ay ku guul darr eysatay inay u guuraan Windows10.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Jarm alka, dawladda federaalka ah ee wadd anka dhaca qarada yurub ayaa weli ay jiraan 33,000 oo goobo shaqo ah oo isticmaala Windows 7.
Qiimaha wuxuu kuxiran yahay nooca Windows 7 ee la adeegs anayo. Inta lagu jiro sanadka ugu horeeya, kuwa isticmaala [Windows 7 Enterprise] waxay bixin doonaan $25 mishiinkiiba uu kujiro barnaamijka W7. Tani waay labo jibaarmaysa oo waxaay noqoneysaa $50 sanadka labaad ee xiga, waxayna noqoneysa $100 iney bixiyaan haddii ay sii isticmaalan sanadka kale. Haysashadda Windows 7 Pro aad ayey qaali u ahaan doontaa. Dib uu cusbooneysinta dhanka aminga (ESUs) wa xay ku bilaabmi doontaa Marka hore $50 ka hor intaysan noqon $100 sanadka labaaad, halka ay kor ugu sii kici doonto oo ay noqon doonto $200 inta lagu guda jiro sannadka saddexaad.
Jaraa’iidka Jarmalka ee Handelsblatt ayaa soo weriyey in dawladdu ay bilawday hawlgalkii loogu guuri lahaa Windows 10 laga soo bilaabo 2018, laakiin ma aysan ku guleysan inay cusbooneysiiso mashiinkaste oo yaal xarumaha dawladda iyo xaruumaha waxbarashadda. Wuxuu int aas ku dartay wargeysku in 20,000 oo ka mid ah 85,000 ee mashii nna da xafiisyada dowladda ee Berlin ay wali ku shaqeynayaan Windows 7.
Dawladda Jarmalka maahan hay’adda kaliya ee aan mashiin ade eda cusbooneysiin, marka ay timaado u guurista Windows 10. Warbixin la shaaciyey sanadkii hore ayaa shaaca ka qaaday in xaru umo sii gaar ah loo leyahay iyo kuwa hay’adaha oo badan ay ku qaad atay waqti dheer in loo raaro mashiinadooda window10.
Sida laga soo xigtay NetMarketShare, boqolkiiba 32% dadka isticm aala Barnaamijka Windowga wali waxay isticmaalan Windows 7, oo ku shaqeeya in kabadan 100 milyan oo mashiin.
In kastoo Microsoft ay dhawaan u soo bandhigtey macaamisheeda wac yigalin ku adaan in ay barnaamijkooda W7 taageeradisa uu ku eg yah ay 14 bisha janaayo 2020, tilmaamo uu sahlaya sidii ay si fudud ugu wareegi lahayeen Windows 10. Haddaba taasina kama hortagin in mal aayin ka mid ah macaamisha Microsoft ay ka mid noqdaan dadka wali haysta W7 ee aanan raabin in ay uu waregan w10 sababo aqoon daro awgeed ama mid gaar ahaneed.
alimusa@axadletimes.com Axadle media Group
MADAXWEYNE XAAF OO MAGACAABIS SAMEEYAY
Madaxweynaha Galmudug Axmed Duc aalle Geelle Xaaf ayaa Taliyaha Amniga Gobolka Mudug u magacaa bay G/le, Duraan Cabdi Xaashi halka taliya kuxige enna loo ma gacaab ay Dhamme Mahad Axmed Warsame.
ASKAR MAREYKAN AH OO DHAAWAC DHANKA MASKAXDA AH UU KA SOO GAARAY WEERAR KII IIRAAN
Waaxda gaashaandhiga ee Mareykan ka ee Pentagon ayaa waxay shaaciyeen in 34 askari uu dhaawacyo dhanka maska xda ah uu ka soo gaaray weerarkii ay Iir aan ku qaaday saldhig uu Mareykanka ku leeyahay Ciraaq.
17 askari ayaa ilaa iyo imika ay ku soco taa qiimayn dhanka caafimaadka maska xda ah. Madaxwayne Donald Trump ayaa sheegay in uusan jirin askar wax ku noqo tay weerarkaasi dhacay 8 January, islamar kaana weerar ay Iiraan kaga aargoosana ysay dilkii ay Mareykanka dileen Janaraal Qaasim Suleymaani.
Mr Trump ayaa xusay in weerarkaasi oo uusan khasaaroka dhalan darteed uu qaatay go'aanka ah in uusan dib weerar ugu qaadin Iiraan. Balse toddobaadkii a anu soo dhaafnay, ayaa Pentagonka wax ay sheegeen 11 askari la daaweeyay ka dib markii lagu arkay calaamado muujina ya in naxdin ay ka muuqato.
Mar toddobaadkan madaxwayne Trump oo ku sugnaa magaalada Davos, ee Switz erland, wax laga waydiiyay arrintan ayaa waxaa uu yiri "waan maqlay in askartaasi madaxa xanuunayo iyo waxyaabo kale, balse waxaan idin sheegi karaa ma aha mid halis ah."
Jimcihi, ayaa waaxda gaashaandhiga ee Mareykanka afhayeen u hadlay Jona than Hoffman waxa uu wariyayaasha u sheegay in 8 ka mid ah askarta ay arrintan saameysay Mareykanka dib loogu soo cel iyay si loo daaweeyo.
16 askari ayaa iyaguna lagu daweeyay gu daha Ciraaq , ayna shaqadooda dib ugu laabteen. Mr Hoffman ayaa xusay in wasii rka gaashaandhiga Mareykanka Mark Es per dhowr maalmood ka dib lagu wargali yay dhaawaca maskaxeed ee askartan soo gaaray. Mareykanka ayaa waxaa dalka Ciraaq ka jooga askar ay tiradoodu gaarayso 5000 oo askari.
NIN DOONAYAY IN UU BANGI LACAG DHIGTO BALSE BOOLIISKA LOOGU YEERAY
Nin Madow ah oo u dhashay Mareyk anka ayaa maxkamadda geynaya Bangi ku yaalla Detroit ka dib markii shaqaal aha bangigaasi ay waceen booliiska ka dib markii uu isku dayay in uu lacag dhigto bangigaasi.
Lacagtan ayaa ahayd mid ay maxka mad u xukuntay ka dib markii uu ku guula ystay kiis ku saabsanaa midib takoor lag ula kacay.
Sauntore Thomas ayaa doonayay in Jeegga lacagta ay maxkamadaasi u xuk untay uu bangiga dhigto.
Hasa yeeshee, mid ka mid ah shaq aalaha bangiga oo iyada qudheeda ah Ma dow ayaa diiday in uu lacagtaasi dhigto, waxa ayna wacday booliiska iyada oo uga shakisay in lacagta ay tahay mid uu wax isdabamarin ku helay ama jeegu yahay mid been abuur ah.
Bangiga TCF ee ku yaalla Livonia, Michigan, ayaa bayaan ay soo saareen ka raali galiyay Mr Thomas.
"Ma ahayn in booliiska ay arrintan ku lug yeeshaan," ayaa lagu sheegay bayaanka bangiga."
Saraakiisha bangiga ayaa waxay sheege en in ay taxadar badan muujiyaan marka uu qof bangiga dhiganayo lacago badan.
Balse Mr Thomas, oo horey u ahaa askari ka tirsan ciidamada cirka ayaa imika ban giga maxkamad geynaya.
"Midibtakoor ayay igu sameeyeen sab abtoo ah in aan madow ahay, arrintan ma aysan dhaci lahayn haddii aan caddaan ahaan lahaa," ayuu warbaahinta u shee gay.
Mr Thomas, oo ka mid ah dadka dee gaanka Detroit, ayaa horey ugu guuley stay kiis uu maxkanmadda ka geeyay qof uu horey ugu shaqayn jiray.
Balse markii uu bangiga tagay si uu lacagt aasi u dhigto ayaa waxaa ka shakiyay shaqaalaha bangiga oo diiday in jeegii uu watay ay aqbalaan.
SHAN XIDDIG OO SABAB U AHEYD GUULDARADII BARCELONA, LAACIBKII QAATAY XIDDIGA GAROONKA & QIIMEYNTA CIYAARTOYDA EE KULANKII VALENCIA IYO BARCELONA
Tababare Quique Setien waxaa soo gaartay guuldaradiisii ugu horeysay ee tan iyo markii uu noqday tababaraha Barcel ona iyadoo Valencia ay 20 ku garaacday kooxda hogaamineysa horyaalka oo marti ku aheyd Mestalla.
Xiddiga Garoonka – Maxi Gomez (Vale ncia)
Waxaa jiray xiddigo badan oo wacd arro u dhigay Valencia kulankii maanta oo uu ka mid ah Geoffrey Kondogbia oo wa cdarro ka dhigay khadka dhexe. Si kas yaba, Gomez ayuu ahaa xiddigii natiijada keenay qeybtii labaad ee ciyaarta isagoo iska soo guday rigooradii laga badbaad iyay qeybtii hore.
Xiddiga reer Uruguay ayaa dhameys tirkiisa goolka labaad waxa uu ahaa mid in dho qabad leh isagoo si deganaan ah u dabmariyay goolhaye Ter Stegen, wuxuu sidoo kale gacan weyn ku lahaa goolkii uu iska dhaliyay Jordi Alba halka uu Barcelo na birta u garaacay qeybtii hore. Haddii aan si sahlan u dhigo, Barcelona waa awo odi weysay inay celiso Gomez.
Xiddigaha Mas’uulka Ka Ahaa Guulda rada Barcelona
Halkeen ka bilaabaa, daafaca Barcel ona gaar ahaan daafaca dhexe aad ayuu u liitay, Pique qalqal weyn ayaa ka muuq day wuxuu galay rigoore, wuxuu ku sigtay inuu shabaqa iska soo taabto, wuxuuna qalad ku lahaa labada gool isagoo mar walba meel qaldan joogay.
Samuel Umtiti waxba kama fiicneyn oo jiljileec weyn ayaa ka muuqday, wuxuuna mar walba dhuminayay kubada isagoo me el qaldan dhigaya, tan iyo markii uu ka soo laabtay dhaawaca xiddiga Faransiiska ku ma soo laabanin qaab ciyaareedkiisii hore.
De Jong wuxuu ku dhumay khadka dhexe oo Kondogbia ayaa daboolay gabigiisba, kama fiicneyn Arthru halka dhanka weera rka Ansu Fati ay soo baxday khibrad yara diisa mana noqon karo bedelka Luis Sua rez.
Valencia – Domenech 7, Wass 6, Paulista 8, Garay 6, Gaya 7, Soler 7, Coquelin 7, Kondogbia 8, Ferran 7, Gomez 8, Gameiro 6.Bedel – Sobrino 5, Costa 5, Rodrigo 5.
Barcelona – Ter Stegen 8, Roberto 5, Pique 4, Umtiti 5, Alba 6, Busquets 7, De Jong 4, Arthur 5, Ansu 5, Griezmann 6,